ShweMinThar: ခေါင်းဆောင်မှု အရေးကြီးလား
ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားလာရတဲ့ စကားသံတွေရှိတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့တယ်၊ ပြည်သူ့အား အရေးကြီးတယ်၊ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီက ပြင်မှရမယ် စသဖြင့်ပေါ့။ မှားလားဆိုတော့ မမှားဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ပြည်သူ့အားက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ အများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာ၊ အများဆန္ဒနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာမို့ အဲဒီ ‘အများ’ က ဉာဏ်ပညာရှိဖို့ လိုတယ်။ တက်ကြွဖို့ လိုတယ်။ နိုင်ငံ့အရေးအရာတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့ လိုတယ်။
သို့သော်လည်း ဒါက ရှိသမျှပြဿနာအားလုံးအတွက် အဖြေတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဥပမာ ပြည်သူတွေကို အမှိုက်မပစ်ဖို့ စည်းကမ်းရှိုဖို့ လုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီက စည်းကမ်းရှိကြပါ ဆိုပြီး ပြောနေရုံနဲ့ လုံလောက်သလား။ ခေါင်းဆောင်တာဝန် ကျေသလား။ ဒါက ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူလို့ မြင်တဲ့သူ တချို့လောက်ကတော့ လိုက်နာမယ်။ လူတိုင်းဆီကတော့ ပြောင်းလဲသွားဖို့ မျှော်လင့်လို့မရဘူး။ တခြားနိုင်ငံမှာ အမှိုက်မပစ်ရဲခဲ့တဲ့သူတွေက ဒီနိုင်ငံထဲကျ လွယ်လွယ်ကူကူ ပစ်နေကြတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ စနစ်တကျ တန်းစီခဲ့တဲ့သူတွေက ဒီရောက်တော့ အတင်းတိုးနေကြတယ်။ ဘာလို့လဲ။ တခြားမှာက အမှိုက်ပစ်တာနဲ့ ဒဏ်တပ်တယ်။ အလွယ်တကူ ပစ်လို့ရအောင်လည်း အမှိုက်ပုံးတွေ ထားထားပေးတယ်။ တန်းမစီဘဲ ကြားဖြတ်ရင် အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ၀ိုင်းကြည့်တယ်။ ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုရှိတော့ တော်ရုံလူက ကြားမဖြတ်ရဲတော့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာကျ ဒဏ်တပ်တာလည်း အားနည်းတယ်။ စာတွေဘယ်လိုကပ်ထားကပ်ထားလည်း တကယ်အရေးယူမခံရတာ သိနေတော့ ပစ်ကြတာပဲ။ အမှိုက်ပုံးတွေကလည်း လုံလုံလောက်လောက် မရှိ။ အမှိုက်ပစ်ချလိုက်လို့လည်း ဘယ်သူကမှ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ မကြည့်ဘူး။ ဒါက သမားရိုးကျပဲ။ အမှိုက်ထုပ်ကြီး ကိုင်ထားတာကမှ ထူးဆန်းနေဦးမယ်။ ဆိုတော့ကာ ပြည်သူတွေ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်မပစ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးမှာတောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း စည်းကမ်းရှိကြပါ ပြောနေလို့မရဘဲ အမှိုက်ကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ပစ်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးပေးရမယ်။ ပြည်သူတွေကြားထဲ စည်းကမ်းမရှိတာဟာ ရှက်စရာကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို ထည့်ပေးရမယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အသက်ဝင်နေအောင် လုပ်ပေးရမယ်။ ဆိုလိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ပြောင်းပါဆိုတာထက် ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးပြီး အဲဒီအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးရမယ်။
အစိုးရပိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ဘဲ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီက အလုပ်တွေကြိုးစား၊ စည်းကမ်းတွေရှိရင်းနဲ့ တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးက မရှိနိုင်သလောက်ပဲ။ စနစ်က မကောင်းရင်၊ ပေါ်လစီတွေက လုပ်သာကိုင်သာ မရှိရင် ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား ထင်သလောက် မအောင်မြင်ဘူးကိုး။ အချိန်တိုအတွင်း တိုးတက်သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်ကို ပြည်သူတွေက တစ်သားတည်း ပါလာကြတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုတိုးတက်သွားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် ခေါင်းဆောင်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း ပြည့်ဝဖို့ဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက် ၄ ချက်ကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
၁။ Everything rises and falls in leadership
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေဟာ ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မှာ အဓိက မူတည်နေပါတယ်။ ဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့ နမူနာပေးလို့ ရတယ်။ အသင်းက ဒီအသင်းပဲ၊ သိပ်ပြီး မပြောင်းလဲဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှေ့နည်းပြနဲ့တုန်းက တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ အသင်းက ခုလက်ရှိနည်းပြနဲ့မှ တပ်ပျက်ကုန်တာတွေ အများကြီး။ အဲ့လိုပဲ၊ နည်းပြလေးပဲ ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ အသင်းသစ်တစ်သင်း အစားထိုးလိုက်သလို ရလဒ်တွေ ထောင်တက်လာတဲ့ အသင်းတွေလည်း တစ်ပုံကြီးပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းရင် သူက အသင်းနဲ့ အံဝင်မယ့်ပုံစံကို သွင်းပေးနိုင်တယ်။ ကစားသမားတွေကို စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ သူတို့ဆီက အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းတွေကို ညှစ်ထုတ်နိုင်တယ်။ အသင်းကို ညီညွှတ်စေတယ်။ စည်းကမ်းရှိစေတယ်။ ရှုံးနိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် မယိမ်းမယိုင်နဲ့ ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ ခေါင်းဆောင်မကောင်းရင်လည်း ပြောင်းပြန်အခြေအနေတွေ အကုန်ဖြစ်ရော။ စိတ်ဓါတ်တွေ ကျကုန်မယ်။ ဒီတော့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ညံ့လာတယ်။ ပါရမီရှင်ပါ ဆိုတဲ့ ကစားသမားတောင် ညံ့တဲ့နည်းပြနဲ့ တွေ့ရင် ထိပ်တန်းအဆင့်ကို ထပ်တက်မလာတော့ဘဲ မှိန်သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ခေါင်းဆောင်မှုကို သိပ်အလေးထား ပြောလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Leadership is an influence
ခေါင်းဆောင်မှုကို စကားလုံးတစ်လုံးတည်း ပြောပါဆို ကျွန်တော်ကတော့ လွှမ်းမိုးမှု (Influence) လို့ ပြောပါမယ်။ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူကို ခေါင်းဆောင်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ အကြမ်းအားဖြင့် ပါဝါ ၂ မျိုးရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုက Positional power ။ ရာထူးနေရာကြောင့် ရလာတဲ့ပါဝါပေါ့။ အပြစ်ပေး အရေးယူလို့ရတယ်၊ ဆုပေးလို့လည်းရတယ်၊ တရားဝင်လည်း ဖြစ်တယ်။ လူတွေက ဒီပါဝါကို မကောင်းဘူး၊ သိပ်အရေးမကြီးဘူး ပြောကြပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လိုအပ်တယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က ရုံးခွဲတစ်ခုက မန်နေဂျာဆိုပါတော့၊ ကိုယ့်လက်အောက်က လူက အဆင်မပြေဘူး၊ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာက သူ့ကို အပြစ်ပေးလို့မရ၊ အလုပ်ထုတ်လို့မရ၊ ဘာလို့ဆိုတော့ ရုံးချုပ်က တိုက်ရိုက်ကိုင်ထားလို့။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဆို ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာက သိပ်ကောင်းတဲ့ပုံစံ ဖြစ်ပေမယ့် လူတစ်ချို့အတွက်တော့ အံမ၀င်နိုင်ဘူး။ ဒီအခါမှာ ခုပြောတဲ့ Positional power က လိုကို လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထက် ပိုအရေးကြီးတာကတော့ Personal power ပဲ။ ဒီရာထူးကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်း၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကြောင့် ရလာတဲ့ ပါဝါ။ ဒီပါဝါကမှ နောက်လိုက်တွေအပေါ် အဓိက လွှမ်းမိုးမှုကို ဖြစ်စေတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်က ရလဒ်ကောင်းတွေ ယူလာပေးမှာ၊ သူနဲ့သာ တွဲလုပ်ခွင့်ရရင် ငါတို့ ဘယ်လိုတိုးတက်သွားမှာ၊ ငါ့မှာ ပြဿနာတခုခုကြုံတိုင်း ဒီခေါင်းဆောင်က အကူအညီပေးနိုင်တယ် စတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ကိုယ့်နောက်လိုက်တွေမှာ ရှိနေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Personal power က တော်တော်ကြီး အားကောင်းနေပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင် Positional power က ကိုယ်လုပ်စေချင်တာတွေကို ‘ညွှန်ကြားချက်ထုတ်’၊ လုပ်ခိုင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းဖြစ်ပြီး Personal power ကတော့ ကိုယ်လုပ်စေချင်တာတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ‘စိတ်ပါလက်ပါ’ လုပ်ချင်လာစေမယ့် အစွမ်းသတ္တိ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Leadership starts with vision
ခေါင်းဆောင်မှုမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖော်ဆောင်ခြင်းက အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ မလုပ်နိုင်ရင် ခေါင်းဆောင်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဆိုရင် မဖြစ်မနေ ဘာလိုလဲဆိုတော့ Vision လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ ပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ လှည်းတစ်စီးကို လိုချင်တဲ့နေရာ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရသလိုပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဒီလှည်းကြီးကို လမ်းမှန်ပေါ်မှာ ရှိနေအောင် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပေးရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ၀င်တွန်းနေလို့ မရပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူဟာ ဘယ်လမ်းကသွားရင် အနီးဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဟာ အရာအားလုံး တတ်သိနေစရာ မလိုဘူးဆိုပေမယ့် နောက်လိုက်တွေထက်တော့ ပိုဝေးဝေးမြင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
Knowledge ဆိုတာက Knowing what to do ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိခြင်းဖြစ်ပြီး Skill ဆိုတာကတော့ Knowing how to do ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို သိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်မယ့်လူဟာ ဘယ်ဒေသမှာတော့ ဘာရောဂါတွေ ဖြစ်နေတယ်၊ ဘာလုပ်ဖို့ လိုတယ် စသဖြင့် ပေါ်လစီချပေးနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ သူချပေးလိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်သိတဲ့၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ Specialist များက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Leaders do the right things. Others do the things right. ခေါင်းဆောင်များဟာ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်များကို လုပ်ကြရသူတွေ ဖြစ်ပြီး၊ နောက်လိုက်များကတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ ဘယ်နံရံမှာ လှေကားထောင်ရမယ်ဆိုတာက ခေါင်းဆောင်က ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။ အဲဒီထောင်လိုက်တဲ့ လှေကားပေါ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်နိုင်ဖို့က နောက်လိုက်တွေရဲ့အလုပ် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Vision မရှိရင် ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်လည်း Vision မရှိလို့ မရပါဘူး။
၄။ Leaders are energetic
ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမြဲတမ်း အင်ပြည့်အားပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ အဖွဲ့အစည်းသေးသေးလေးတစ်ခုကနေ နိုင်ငံအဆင့်အထိ ခေါင်းဆောင်တွေကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်မပါလက်မပါ မပြောရဲ မဆိုရဲ ဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ အားလုံးက တက်ကြွနေတယ်၊ မာန်ပါနေတယ်၊ တစ်ခုခုကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ ဟန်ပန်ပေါက်နေတယ်၊ သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်းတည်နိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတယ်၊ ဘယ်လိုရှုံးနိမ့်မှုမျိုးကြုံကြုံ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲ ကြုံကြုံ စိတ်ဓါတ်မကျဘဲ ရှေ့ဆက်တိုးနေတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျချင်နေတဲ့ နောက်လိုက်တွေကို အဲဒီဟန်ပန်တွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြန်တက်ကြွအောင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ အနာဂတ်အမြင် (Vision) ရှိရမယ် ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုအမြင်ရှိနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘဲ အဲဒီအမြင်၊ အဲဒီအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကို လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လည်း အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိရတယ်။ မဟုတ်ရင် မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားမယ်။ ရည်မှန်းချက်ရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့တော့ ဆန်ရမယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်က ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကိုရော နောက်လိုက်တွေကိုပဲ နေ့နေ့ညည လှုံ့ဆော်ပေးနေတာမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ ရည်မှန်းချက်တော့ ရှိပါရဲ့၊ လက်တွေ့ဖြစ်မလာရင်လည်း အလကားပဲ။ အဲဒီလို အကောင်အထည် ဖော်လာဖို့ဆိုရင်တော့ ခေါင်းဆောင်တွေက Energy အပြည့် ဖြစ်နေရမယ်။ ရလဒ်ထွက်အောင် အလုပ်လုပ်တတ်ရမယ်။
တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ကျစ်လျစ်ခိုင်မာစွာနဲ့ စနစ်တကျဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးပြီး ရည်မှန်းချက်တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လိုက်တစ်ယောက်ချင်းစီဟာ အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ခေါင်းဆောင်မှု မကောင်းသရွေ့ အပြောင်းအလဲတွေ၊ တိုးတက်မှုတွေဟာ မြန်ဆန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှုဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရယ်၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ အနာဂတ်အမြင် (Vision) ၊ လွှမ်းမိုးမှု (Influence) နဲ့ စွမ်းအား (Energy) တွေ ရှိုဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာရယ်ကို သိစေချင်ပါတယ်။
ဒီဘကျနောကျပိုငျးမှာ ကယျြကယျြလောငျလောငျ ကွားလာရတဲ့ စကားသံတှရှေိတယျ။ ပွိုငျတူတှနျးရငျ ရှတေ့ယျ၊ ပွညျသူ့အား အရေးကွီးတယျ၊ ပွညျသူတဈယောကျခငျြးစီက ပွငျမှရမယျ စသဖွငျ့ပေါ့။ မှားလားဆိုတော့ မမှားဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ဒီမိုကရစေီစနဈမှာ ပွညျသူ့အားက သိပျအရေးကွီးတယျ။ အမြားက ရှေးကောကျတငျမွှောကျတာ၊ အမြားဆန်ဒနဲ့ ဆုံးဖွတျတာမို့ အဲဒီ ‘အမြား’ က ဉာဏျပညာရှိဖို့ လိုတယျ။ တကျကွှဖို့ လိုတယျ။ နိုငျငံ့အရေးအရာတှမှော စိတျဝငျစားမှုရှိဖို့ လိုတယျ။
သို့သျောလညျး ဒါက ရှိသမြှပွဿနာအားလုံးအတှကျ အဖွတေဈခုတော့ မဟုတျဘူး။ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဥပမာ ပွညျသူတှကေို အမှိုကျမပဈဖို့ စညျးကမျးရှိုဖို့ လုပျမယျဆိုပါတော့။ ပွညျသူတဈယောကျခငျြးစီက စညျးကမျးရှိကွပါ ဆိုပွီး ပွောနရေုံနဲ့ လုံလောကျသလား။ ခေါငျးဆောငျတာဝနျ ကသြေလား။ ဒါက ရှကျစရာကောငျးတဲ့ အပွုအမူလို့ မွငျတဲ့သူ တခြို့လောကျကတော့ လိုကျနာမယျ။ လူတိုငျးဆီကတော့ ပွောငျးလဲသှားဖို့ မြှျောလငျ့လို့မရဘူး။ တခွားနိုငျငံမှာ အမှိုကျမပဈရဲခဲ့တဲ့သူတှကေ ဒီနိုငျငံထဲကြ လှယျလှယျကူကူ ပဈနကွေတယျ။ နိုငျငံခွားမှာ စနဈတကြ တနျးစီခဲ့တဲ့သူတှကေ ဒီရောကျတော့ အတငျးတိုးနကွေတယျ။ ဘာလို့လဲ။ တခွားမှာက အမှိုကျပဈတာနဲ့ ဒဏျတပျတယျ။ အလှယျတကူ ပဈလို့ရအောငျလညျး အမှိုကျပုံးတှေ ထားထားပေးတယျ။ တနျးမစီဘဲ ကွားဖွတျရငျ အထငျသေးတဲ့အကွညျ့နဲ့ ဝိုငျးကွညျ့တယျ။ ဒီလိုယဉျကြေးမှုရှိတော့ တျောရုံလူက ကွားမဖွတျရဲတော့ဘူး။
ကြှနျတျောတို့ဆီမှာကြ ဒဏျတပျတာလညျး အားနညျးတယျ။ စာတှဘေယျလိုကပျထားကပျထားလညျး တကယျအရေးယူမခံရတာ သိနတေော့ ပဈကွတာပဲ။ အမှိုကျပုံးတှကေလညျး လုံလုံလောကျလောကျ မရှိ။ အမှိုကျပဈခလြိုကျလို့လညျး ဘယျသူကမှ အထငျသေးတဲ့အကွညျ့နဲ့ မကွညျ့ဘူး။ ဒါက သမားရိုးကပြဲ။ အမှိုကျထုပျကွီး ကိုငျထားတာကမှ ထူးဆနျးနဦေးမယျ။ ဆိုတော့ကာ ပွညျသူတှေ စညျးကမျးမဲ့အမှိုကျမပဈဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ်စသေးသေးလေးမှာတောငျ တဈဦးတဈယောကျခငျြး စညျးကမျးရှိကွပါ ပွောနလေို့မရဘဲ အမှိုကျကို စညျးနဲ့ကမျးနဲ့ ပဈနိုငျလောကျတဲ့ အခွအေနကေောငျးတှေ ဖနျတီးပေးရမယျ။ ပွညျသူတှကွေားထဲ စညျးကမျးမရှိတာဟာ ရှကျစရာကောငျးတယျ ဆိုတဲ့ ယဉျကြေးမှုတဈခုကို ထညျ့ပေးရမယျ။ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ အသကျဝငျနအေောငျ လုပျပေးရမယျ။ ဆိုလိုတာက တဈဦးတဈယောကျခငျြး ပွောငျးပါဆိုတာထကျ ခေါငျးဆောငျမှုကောငျးကောငျးပေးပွီး အဲဒီအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာအောငျ လုပျပေးရမယျ။
အစိုးရပိုငျး၊ ခေါငျးဆောငျပိုငျးက ပွောငျးလဲမှုတှေ မလုပျဘဲ ပွညျသူတဈယောကျခငျြးစီက အလုပျတှကွေိုးစား၊ စညျးကမျးတှရှေိရငျးနဲ့ တိုးတကျသှားတယျဆိုတာမြိုးက မရှိနိုငျသလောကျပဲ။ စနဈက မကောငျးရငျ၊ ပျေါလစီတှကေ လုပျသာကိုငျသာ မရှိရငျ ဘယျလောကျကွိုးစားကွိုးစား ထငျသလောကျ မအောငျမွငျဘူးကိုး။ အခြိနျတိုအတှငျး တိုးတကျသှားတဲ့ နိုငျငံတှကေို ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာလညျး ခေါငျးဆောငျမှုကောငျးတာကို တှရေ့တယျ။ အဲဒီနောကျကို ပွညျသူတှကေ တဈသားတညျး ပါလာကွတယျ၊ ဒါကွောငျ့လညျး ဒီလိုတိုးတကျသှားတာ ဖွဈတယျ။ ဒီအတှကျ ခေါငျးဆောငျတှမှော ခေါငျးဆောငျမှုအရညျအခငျြး ပွညျ့ဝဖို့ဟာ သိပျအရေးကွီးပါတယျ။
ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ ခေါငျးဆောငျမှုအတှကျ အရေးကွီးတဲ့အခကျြ ၄ ခကျြကို ဆှေးနှေးလိုပါတယျ။
အဖှဲ့အစညျးတဈခု၊ နိုငျငံတဈခုရဲ့ အောငျမွငျမှု၊ ကရြှုံးမှုတှဟော ခေါငျးဆောငျမှုအပျေါမှာ အဓိက မူတညျနပေါတယျ။ ဘောလုံးအသငျးတှနေဲ့ နမူနာပေးလို့ ရတယျ။ အသငျးက ဒီအသငျးပဲ၊ သိပျပွီး မပွောငျးလဲဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရှနေ့ညျးပွနဲ့တုနျးက တျောတျောအဆငျပွခေဲ့တဲ့ အသငျးက ခုလကျရှိနညျးပွနဲ့မှ တပျပကျြကုနျတာတှေ အမြားကွီး။ အဲ့လိုပဲ၊ နညျးပွလေးပဲ ပွောငျးလိုကျရုံနဲ့ အသငျးသဈတဈသငျး အစားထိုးလိုကျသလို ရလဒျတှေ ထောငျတကျလာတဲ့ အသငျးတှလေညျး တဈပုံကွီးပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ခေါငျးဆောငျကောငျးရငျ သူက အသငျးနဲ့ အံဝငျမယျ့ပုံစံကို သှငျးပေးနိုငျတယျ။ ကစားသမားတှကေို စိတျဓါတျလှုံ့ဆျောပေးတယျ။ သူတို့ဆီက အကောငျးဆုံး အရညျအခငျြးတှကေို ညှဈထုတျနိုငျတယျ။ အသငျးကို ညီညှတျစတေယျ။ စညျးကမျးရှိစတေယျ။ ရှုံးနိမျ့နတေဲ့အခြိနျမှာတောငျ မယိမျးမယိုငျနဲ့ ရှကေ့နေ ဦးဆောငျပေးနိုငျတယျ။ ခေါငျးဆောငျမကောငျးရငျလညျး ပွောငျးပွနျအခွအေနတှေေ အကုနျဖွဈရော။ စိတျဓါတျတှေ ကကြုနျမယျ။ ဒီတော့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ညံ့လာတယျ။ ပါရမီရှငျပါ ဆိုတဲ့ ကစားသမားတောငျ ညံ့တဲ့နညျးပွနဲ့ တှရေ့ငျ ထိပျတနျးအဆငျ့ကို ထပျတကျမလာတော့ဘဲ မှိနျသှားတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လညျး ခေါငျးဆောငျမှုကို သိပျအလေးထား ပွောလာကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ခေါငျးဆောငျမှုကို စကားလုံးတဈလုံးတညျး ပွောပါဆို ကြှနျတျောကတော့ လှမျးမိုးမှု (Influence) လို့ ပွောပါမယျ။ လှမျးမိုးနိုငျစှမျးမရှိတဲ့သူကို ခေါငျးဆောငျလို့ ပွောလို့မရပါဘူး။ ခေါငျးဆောငျတဈယောကျမှာ အကွမျးအားဖွငျ့ ပါဝါ ၂ မြိုးရှိတယျ။ ပထမတဈခုက Positional power ။ ရာထူးနရောကွောငျ့ ရလာတဲ့ပါဝါပေါ့။ အပွဈပေး အရေးယူလို့ရတယျ၊ ဆုပေးလို့လညျးရတယျ၊ တရားဝငျလညျး ဖွဈတယျ။ လူတှကေ ဒီပါဝါကို မကောငျးဘူး၊ သိပျအရေးမကွီးဘူး ပွောကွပမေယျ့လညျး တကယျတမျးတော့ အတိုငျးအတာတဈခုထိ လိုအပျတယျ။ ဥပမာ ကိုယျက ရုံးခှဲတဈခုက မနျနဂြောဆိုပါတော့၊ ကိုယျ့လကျအောကျက လူက အဆငျမပွဘေူး၊ အလုပျမလုပျဘူး၊ စညျးကမျးမလိုကျနာဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့မှာက သူ့ကို အပွဈပေးလို့မရ၊ အလုပျထုတျလို့မရ၊ ဘာလို့ဆိုတော့ ရုံးခြုပျက တိုကျရိုကျကိုငျထားလို့။ ဒီလိုအနအေထားမြိုးမှာဆို ဘယျလိုမှ အဆငျပွမှော မဟုတျဘူး။ မတ်ေတာရှထေ့ားပွီး အုပျခြုပျမယျဆိုတာက သိပျကောငျးတဲ့ပုံစံ ဖွဈပမေယျ့ လူတဈခြို့အတှကျတော့ အံမဝငျနိုငျဘူး။ ဒီအခါမှာ ခုပွောတဲ့ Positional power က လိုကို လိုအပျလာပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီထကျ ပိုအရေးကွီးတာကတော့ Personal power ပဲ။ ဒီရာထူးကွောငျ့ မဟုတျဘူး၊ သူ့ရဲ့ စိတျဓါတျ၊ သူ့ရဲ့ အရညျအခငျြး၊ သူ့ရဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှကွေောငျ့ ရလာတဲ့ ပါဝါ။ ဒီပါဝါကမှ နောကျလိုကျတှအေပျေါ အဓိက လှမျးမိုးမှုကို ဖွဈစတေယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျက ရလဒျကောငျးတှေ ယူလာပေးမှာ၊ သူနဲ့သာ တှဲလုပျခှငျ့ရရငျ ငါတို့ ဘယျလိုတိုးတကျသှားမှာ၊ ငါ့မှာ ပွဿနာတခုခုကွုံတိုငျး ဒီခေါငျးဆောငျက အကူအညီပေးနိုငျတယျ စတဲ့ အတှေးမြိုးတှေ ကိုယျ့နောကျလိုကျတှမှော ရှိနပွေီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ Personal power က တျောတျောကွီး အားကောငျးနပွေီလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။ ပွောရရငျ Positional power က ကိုယျလုပျစခေငျြတာတှကေို ‘ညှနျကွားခကျြထုတျ’၊ လုပျခိုငျးနိုငျတဲ့ အစှမျးဖွဈပွီး Personal power ကတော့ ကိုယျလုပျစခေငျြတာတှကေို သူတို့ကိုယျတိုငျ ‘စိတျပါလကျပါ’ လုပျခငျြလာစမေယျ့ အစှမျးသတ်တိ ဖွဈပါတယျ။
ခေါငျးဆောငျမှုမှာ အပွောငျးအလဲတှေ ဖျောဆောငျခွငျးက အရေးကွီးတဲ့ အခနျးကဏ်ဍအနနေဲ့ ပါဝငျပါတယျ။ အပွောငျးအလဲ မလုပျနိုငျရငျ ခေါငျးဆောငျလို့ ပွောလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလို အပွောငျးအလဲလုပျဖို့ဆိုရငျ မဖွဈမနေ ဘာလိုလဲဆိုတော့ Vision လိုပါတယျ။ တကယျတော့ ခေါငျးဆောငျမှုဆိုတာ ပစ်စညျးတှအေပွညျ့တငျထားတဲ့ လှညျးတဈစီးကို လိုခငျြတဲ့နရော အရောကျပို့ပေးနိုငျဖို့ ကွိုးစားရသလိုပါပဲ။ ခေါငျးဆောငျဟာ ဒီလှညျးကွီးကို လမျးမှနျပျေါမှာ ရှိနအေောငျ ဦးဆောငျလမျးညှနျပေးရသူ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ ဝငျတှနျးနလေို့ မရပါဘူး။ ခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့သူဟာ ဘယျလမျးကသှားရငျ အနီးဆုံးဖွဈမယျဆိုတဲ့ လမျးကို ရှေးခယျြနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခေါငျးဆောငျဟာ အရာအားလုံး တတျသိနစေရာ မလိုဘူးဆိုပမေယျ့ နောကျလိုကျတှထေကျတော့ ပိုဝေးဝေးမွငျဖို့ အရေးကွီးတယျ။
Knowledge ဆိုတာက Knowing what to do ဘာလုပျရမလဲဆိုတာကို သိခွငျးဖွဈပွီး Skill ဆိုတာကတော့ Knowing how to do ဘယျလိုလုပျရမယျ ဆိုတာကို သိခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ ကနျြးမာရေး အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို ဦးဆောငျမယျ့လူဟာ ဘယျဒသေမှာတော့ ဘာရောဂါတှေ ဖွဈနတေယျ၊ ဘာလုပျဖို့ လိုတယျ စသဖွငျ့ ပျေါလစီခပြေးနိုငျဖို့ လိုတယျ။ သူခပြေးလိုကျတဲ့ လုပျငနျးစဉျတဈရပျကို ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာကို အသေးစိတျသိတဲ့၊ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ Specialist မြားက အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Leaders do the right things. Others do the things right. ခေါငျးဆောငျမြားဟာ မှနျကနျတဲ့အလုပျ၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ လုပျသငျ့လုပျထိုကျတဲ့ အလုပျမြားကို လုပျကွရသူတှေ ဖွဈပွီး၊ နောကျလိုကျမြားကတော့ ကိုယျလုပျရမယျ့အလုပျကို မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ ဆောငျရှကျကွရပါတယျ။ ဘယျနံရံမှာ လှကေားထောငျရမယျဆိုတာက ခေါငျးဆောငျက ဆုံးဖွတျပေးမယျ။ အဲဒီထောငျလိုကျတဲ့ လှကေားပျေါကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျတကျနိုငျဖို့က နောကျလိုကျတှရေဲ့အလုပျ ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ Vision မရှိရငျ ခေါငျးဆောငျ မဟုတျဘူး။ ခေါငျးဆောငျတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ဆိုရငျလညျး Vision မရှိလို့ မရပါဘူး။
ခေါငျးဆောငျတှဟော အမွဲတမျး အငျပွညျ့အားပွညျ့ဖွဈနတေယျ။ အဖှဲ့အစညျးသေးသေးလေးတဈခုကနေ နိုငျငံအဆငျ့အထိ ခေါငျးဆောငျတှကေို မွငျယောငျကွညျ့လိုကျပါ။ စိတျမပါလကျမပါ မပွောရဲ မဆိုရဲ ဖွဈနတေဲ့ ခေါငျးဆောငျတဈယောကျမှ မရှိပါဘူး။ အားလုံးက တကျကွှနတေယျ၊ မာနျပါနတေယျ၊ တဈခုခုကို စိတျပိုငျးဖွတျထားတဲ့ ဟနျပနျပေါကျနတေယျ၊ သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုငျးတညျနိုငျဖို့ အမွဲကွိုးစားနတေယျ၊ ဘယျလိုရှုံးနိမျ့မှုမြိုးကွုံကွုံ၊ ဘယျလိုအခကျအခဲပဲ ကွုံကွုံ စိတျဓါတျမကဘြဲ ရှဆေ့ကျတိုးနတေယျ၊ စိတျဓါတျကခြငျြနတေဲ့ နောကျလိုကျတှကေို အဲဒီဟနျပနျတှနေဲ့ စိတျဓါတျပွနျတကျကွှအောငျ လုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ။
ခေါငျးဆောငျတဈယောကျမှာ အနာဂတျအမွငျ (Vision) ရှိရမယျ ပွောခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလိုအမွငျရှိနရေုံနဲ့ မလုံလောကျဘဲ အဲဒီအမွငျ၊ အဲဒီအနာဂတျရညျမှနျးခကျြကို လကျတှဖွေ့ဈလာအောငျလညျး အကောငျအထညျဖျောပေးနိုငျစှမျး ရှိရတယျ။ မဟုတျရငျ မွနျမာ့အားကစား ကမ်ဘာကို လှမျးရမညျ ဆိုတာမြိုး ဖွဈသှားမယျ။ ရညျမှနျးခကျြရှိတာ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျတှတေ့ော့ ဆနျရမယျ။ အဲဒီရညျမှနျးခကျြက ခေါငျးဆောငျကိုယျတိုငျကိုရော နောကျလိုကျတှကေိုပဲ နနေ့ညေ့ည လှုံ့ဆျောပေးနတောမြိုး ဖွဈရမယျ။ ရညျမှနျးခကျြတော့ ရှိပါရဲ့၊ လကျတှဖွေ့ဈမလာရငျလညျး အလကားပဲ။ အဲဒီလို အကောငျအထညျ ဖျောလာဖို့ဆိုရငျတော့ ခေါငျးဆောငျတှကေ Energy အပွညျ့ ဖွဈနရေမယျ။ ရလဒျထှကျအောငျ အလုပျလုပျတတျရမယျ။
တကယျတော့ ခေါငျးဆောငျမှုဆိုတာ အဖှဲ့အစညျးတဈရပျကို ကဈြလဈြခိုငျမာစှာနဲ့ စနဈတကဖြွဈအောငျ လမျးညှနျပေးပွီး ရညျမှနျးခကျြတဈခု အောငျမွငျဖို့ လုပျဆောငျပေးရတဲ့ အလုပျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ နောကျလိုကျတဈယောကျခငျြးစီဟာ အရေးကွီးတာမှနျပမေယျ့ ခေါငျးဆောငျပိုငျးက ခေါငျးဆောငျမှု မကောငျးသရှေ့ အပွောငျးအလဲတှေ၊ တိုးတကျမှုတှဟော မွနျဆနျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ခေါငျးဆောငျမှုဟာ သိပျအရေးကွီးတယျဆိုတာရယျ၊ ခေါငျးဆောငျတဈယောကျမှာ အနာဂတျအမွငျ (Vision) ၊ လှမျးမိုးမှု (Influence) နဲ့ စှမျးအား (Energy) တှေ ရှိုဖို့ လိုအပျတယျဆိုတာရယျကို သိစခေငျြပါတယျ။
Org. စာရေးသူ - ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ
Labels: စီမံခန့်ခွဲရေး